လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၄) - MoeMaKa Media
Home / Currents / Hla Kyaw Zaw / International / လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၄)
လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၄)
Currents, Hla Kyaw Zaw, International
(မိုးမခ) မေ ၂၇၊ ၂၀၁၉
ဒီပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီး အောင်မြင်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးတဲ့ အာမခံချက်ကတော့ ဒီစီမံကိန်းမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ နိုင်ငံများနဲ့ရော နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့စည်းများနဲ့ပါ ပေါ်လစီ မူဝါဒများ ဆက်စပ်နိုင်မှု လိုအပ်ချက်ပါပဲ။
ဒီအတွက် တရုတ်နိုင်ငံဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၅) နှစ် ကာလအတွင်း သေချာ ကျန ပြည့်စုံတဲ့ ဖက်စုံတဲ့ ညှိနှိုင်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးမှုတွေ အကြိမ်ကြိမ် အဆင့်အသီးသီးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး အလွန်ကျယ်ပြန့်တဲ့ သဘောတူညီချက်တွေကို ရခဲ့ပါတယ်။
၁။ နိုင်ငံတကာ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ရရှိခဲ့တဲ့အချက်များ
ဒီပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးရဲ့ အဓိကအတွေးအမြင်များကို ကုလသမဂ္ဂ၊ G - 20၊ အေပက်စတဲ့ အဖွဲ့အစည်းများရဲ့မှတ်တမ်းများမှာထည့်သွင်းခဲ့ကြပါတယ်။ တချို့ဖြစ်ရပ်များဟာ သမိုင်းဝင်ဖြစ်ရပ်များပါ။
ဥပမာ ၂၀၁၇ မတ်လကကျင်းပခဲ့တဲ့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်၂၃၄၄ မှာ “လူသားသမိုင်းအတွက် အနာ ဂါတ်တွေကို မျှဝေထားတဲ့အဖွဲ့အစည်း” ဆိုတဲ့အယူအဆကို ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထည့်သွင်းဖော်ပြ ပြဌာန်းခြင်းခံ ရပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်မှာပဲ ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းကြီးနဲ့ တခြားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းများကတဆင့် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝန်း အဖွဲ့အစည်းများအနေနဲ့ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာအောင် လုပ်ဆောင် ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်။
အဲသလို မှတ်တမ်းတွေထဲ ထောက်ခံချက်ပေးထားတာ ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ တိုက်တွန်းတာတွေထည့်သွင်းဖော်ပြခံရတဲ့ တခြား နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများလည်း အများကြီးရှိပါသေးတယ်။ ဥပမာ ရှံဟဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ တရုတ် အာဖရိကနိုင်ငံများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ တရုတ် လက်တင်အမေရိကနိုင်ငံများနဲ့ ကရစ်ဘီယံနိုင်ငံများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ စသဖြင့် အတော်များပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလကုန်မှာကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးရဲ့ဖိုရမ်မှာ လာတက်ရောက်တဲ့ ကု လသမဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး အင်တိုနီယို ဂူတာရာစ်က ဖွင့်ပွဲနေ့ မိန့်ခွန်းမှာ ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားပါတယ်။
- ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်များဟာ ကုလသမဂ္ဂကဖော်ဆောင်နေတဲ့ ၂၀၃၀ မှ အပြည့်အဝဖော် ဆောင်ရမယ့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်ကြီးများနဲ့လည်း ဆက်စပ်နေပါတယ်။
- ကုလအနေနဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းကဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး အဲဒီနိုင်ငံများရဲ့ အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက် များကို ကူညီဖော်ဆောင်လုပ်ကိုင်ပေးနေရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမျိုးမျိုးဟာ ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု များနဲ့ ကိုက်ညီတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
- ဒါဟာ တရုတ်ပြည်ရဲ့ နိုင်ငံတိုင်းပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့ စနစ် (Multilateralism) ကို ၂၁ ရာစုရဲ့ ခေတ်သစ်လုပ်နည်းလုပ်ဟန် တရပ်အဖြစ် ပုံဖော်လုပ်ဆောင်မှုရဲ့အောင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
၂။ နိုင်ငံအသီးသီးနဲ့ အစိုးရအချင်းချင်းအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ရရှိတဲ့သဘောတူညီချက်များ
ဒီပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းဘောင်အတွင်း ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံများနဲ့ နိုင်ငံတကာ့အဖွဲ့အစည်းများဟာ မတူကွဲပြားတဲ့အမြင်များကိုထိမ်းသိမ်းထား ပြီး ဘုံအစချီချက် (အကျိုးစီးပွား) ကိုရှာဖွေရေးဆိုတဲ့မူပေါ်အခြေခံကာ စီးပွား ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး စီမံ ကိန်းများပေါ်လစီများ အပေါ်အမြင်များဖလှယ်ကြပါတယ်။ အပြန်ပြန်အလှန်လှန်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် စီမံကိန်းနဲ့နည်းနာများကို သဘောတူညီမှုရတဲ့အထိ ရှာဖွေကြပါတယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ ၂၀၁၉ မတ်လအကုန်အထိ တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံ ပေါင်း၁၂၅ နိုင်ငံနဲ့ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း ၂၉ ဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သဘောတူညီချက် စာချုပ်ပေါင်း ၁၇၃ ခု ချုပ်ဆိုပြီးခဲ့ပါပြီ။
ဒီလိုစီမံကိန်းကြီးများကိုဆက်စပ်လုပ်ဆောင်ရာမှာ အခုအချိန်မှာ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှု စံပြပုံစံ လို့ပြောဆိုလာနေ တဲ့ တရုတ်ရဲ့ ပိုးလမ်းမ သစ်စီမံကိန် (BRI) နဲ့ ယူရေရှား စီးပွားရေးအဖွဲ့ (Eurasian Economic Union.E.E.U) တို့အကြား ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဥပမာအဖြစ် ကြည့်ရအောင်ပါ။
၂၀၁၇ မေလ ပေကျင်းမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ပထမအကြိမ် ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးရဲ့ဖိုရမ် (Belt and Road Initiative B.R.I Forum) မှာရော ၂၀၁၉ ဧပြီလကုန်ရက်များမှာကျင်းပတဲ့ ဒုတိယဖိုရမ်မှာရော အိမ်ရှင်တရုတ်သမတ ရှီက အထူးဧည့်သည် တော်အဖြစ်အနေနဲ့ သူ့ဘေးမှာထားပြီး ဂရုတစိုက်နေရာပေး ဆက်ဆံခံရတဲ့သူကတော့ ရုရှားသမတပူတင်ပါ။ အခမ်းအနား တွေမှာလည်း မိန့်ခွန်းတွေပေးရာမှာ ပထမ သမတရှီက အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောပြီးတာနဲ့ ဒုတိယမိန့်ခွန်းပြောသူဟာလည်း ပူတင် ပါပဲ။
တကယ်တော့ တရုတ်နဲ့ ရုရှားဆက်ဆံရေးဟာ သမိုင်းအရ သေနင်္ဂဗျူဟာလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးပြိုကွဲသွားအပြီး အဲဒီကပြိုကွဲထွက်လာတဲ့ ဥရောပအလယ်ပိုင်း (ယူရေရှား) နိုင်ငံများ (အာမေးနီးယား၊ ဘိုင်လာရာဇ်၊ ကာဇက်စတန်၊ ကာဂျစ်စတန်) ကို ရုရှားက ပူးပေါင်းစုစည်းပြီး အဲဒီယူရေရှားစီးပွားရေးအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။
နဂိုတိုင်းပြည်တပြည်တည်းက ပြည်နယ်များအဖြစ်တည်ရှိခဲ့တဲ့ အခုခွဲထွက်နိုင်ငံများအနေနဲ့ မူလပင်မနိုင်ငံကြီးနဲ့ ပြန်လည် ပေါင်းစည်းတာဖြစ်လို့ အခြေခံအဆောက်အအုံတွေနဲ့ ယန္တာရားလည်ပတ်မှုတွေက အဆင်သင့်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီပေါင်း စီးလာမှုဟာ အလွန်လျှင်မြန်သွက်လက်ခဲ့ပါတယ်။
တရုတ်ဖက်က စဉ်းစားနည်းများကလည်း အလွန်လက်တွေ့ကြပါတယ်။
၁၉၉၁ ဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးပြိုကွဲသွားတော့ တရုတ်အတွက်က အတော်အသက်ရှူချောင်သွားပါတယ်။ ဆိုဗီယက် တပ်များ က သန်းနဲ့ချီပြီး တရုတ်နယ်စပ်မှာချရပ်ထားလို့ တရုတ်အနေနဲ့ လုံခြုံရေးအရ ခြိမ်းခြောက်မှုတရပ်ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါကိုရင် ဆိုင်ပြီး တရုတ်တပ်တွေကလည်း နယ်စပ်တလျှောက် သန်းနဲ့ချီ ချထားရပါတယ်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံကြီးပြိုသွားတော့ တရုတ် တွေ ဒီတပ်တွေပြန်ရုပ်ပြီး သူ့နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး (စစ်တပ်အပါ) တွေကို ဇောက်ချလုပ်နိုင်ပါတော့တယ်။ ဒါ့အပြင် တရုတ်က ရုရှားအပါ ကွဲထွက်လာတဲ့နိုင်ငံများဆီက ရနိုင်သမျှ အခွင့်ကောင်း အကွက်ကောင်းများကိုလည်း (တိုင်းပြည် အရံငွေ အလျှံပယ်ရှိနေမှုကြောင့်) ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဥပမာ ယူကရိန်းနိုင်ငံ ဆိပ်ကမ်းမှာဆိုဗီယက်ခေတ်က ချရပ်ထားတဲ့ လေယဉ်တင်သင်္ဘောကြီးကို ငွေကြေးမတတ်နိုင်လို့ မထိမ်းသိမ်းနိုင်တာကို တရုတ်က ပေါ-ချောင်-ကောင်း ဝယ်ပြီး တရုတ်ပြည်သယ်လာ အကုန်ဖြုတ် လေ့လာ ပြန်တပ်ဆင် ပြန်ပြုပြင်နဲ့ ၂၀၁၂ ခုမှာတော့ လျောင်နင်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ တရုတ်ရေတပ်ရဲ့ ပထမဆုံးသော လေယဉ်တင်သင်္ဘောကြီးအဖြစ် ရေချ လိုက်နိုင်ရုံမက အခုအခါ တရုတ်နိုင်ငံလုပ် လေယာဉ်တင် သင်္ဘောတွေတောင် တည်ဆောက်နေပါပြီ။
ဆိုဗီယက်ယူနီယံက သုတေသနလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးကိုလည်း ငွေကြေးထည့်ဝင်မတည်ပြီး (တချို့လည်း ဝယ်ပါတယ်။)ဆက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ အာကာသဆိုင်ရာသုတေသနလုပ်ငန်းများ။
ဆိုဗီယက်က ကွဲထွက်ကုန်တဲ့နိုင်ငံများကိုလည်း ခြေမြန်လက်မြန် ဝင်ရောက်ပြီး ရုရှားပညာရှင်တွေပြန်သွားလို့ ပေါ်လာတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ကူညီဖြေရှင်းထားပေးမှုတွေကလည်း အဲဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ (ဒါတွေက ပိုး လမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးပေါ်လာတဲ့အခါ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ ရေခံမြေခံပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပြီးဖြစ်နေပါတော့တယ်။)
ဒီအခြေခံတွေအောက်မှာ ရုရှားသမတပူတင်ရဲ့တီထွင်ချက် ယူရေရှားစီးပွားရေးအဖွဲ့ပေါ်လာတဲ့အခါ အလွန်ကိုသဘာ၀ ကျစွာ ပူးပေါင်းရောယှက် သွားတော့တာပါပဲ။
ယူရေရှား စီးပွားရေးအဖွဲ့ဟာ ယန္တာရားအပြည့်အစုံနဲ့ စုစည်းပေါင်းစပ်ထားတဲ့ အဆင့်မြင့်အဖွဲ့အစည်းတရပ်ဖြစ်ပြီး ပိုးလမ်းမ သစ်စီမံကိန်းကလည်း ဒေသတခုလုံးကိုလွှမ်းခြုံထားတဲ့ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တဲ့ စီမံကိန်းတရပ်ဖြစ်တာကြောင့် အခြေခံ အကျိုးစီးပွားပဋိပက္ခ မရှိပါဘူး။ နှစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ အခြေခံမူဝါဒ (ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဘုံ ဖွံ့ဖြိုးတက်ရေး) များမှာလည်း တူညီကြပါတယ်။ နှစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပုံစံများဟာလည်း အပြန်အလှန်ဖြည့်စွက်ပေးတဲ့ (Complementary) ပုံစံလည်း ဖြစ်နေပါ တယ်။ (ဥပမာ ယူရေရှားအဖွဲ့ရဲ့အား နည်းချက်များဖြစ်တဲ့ ငွေအရင်းအနှီးလိုအပ်ခြင်း၊ တချို့နိုင်ငံများ ကုန်းပိတ် နိုင်ငံများဖြစ် နေခြင်း စတာတွေကို တရုတ်ရဲ့ ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းရဲ့ အားသာချက်များက ဖြည့်စွက်ပေးနိုင်ခြင်း။)
ဒါ့အပြင် နိုင်ငံတကာ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်ဦးစီးတဲ့ အနောက်နိုင်ငံက တရုတ်နဲ့ရုရှားအပေါ် ကမ္ဘာစီးပွားရေးစနစ်က ဖယ် ထုတ်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့ဖြစ်စဉ်များက တရုတ်နဲ့ ရုရှားပူးပေါင်းရေးကို ပိုမိုလျှင်မြန်စေ ပိုမိုကျစ်လစ်စေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သေနင်္ဂဗျူဟာပေါင်းစပ်မှုပါပဲ။
အမေရိကန်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ တဦးတည်းဦးဆောင်တဲ့နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံရေးစနစ် (Unilateralism or Unipolarism) နဲ့ တရုတ် ရုရှားအပါအဝင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံအများအပြားကလိုလားနေတဲ့ နိုင်ငံအားလုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတဲ့စနစ် (Multilateralism or Multipolarism ) တို့အကြားက အားပြိုင်မှု သို့မဟုတ် သင်္ကေတတခုဖြစ်လာတာပါ။
ဒါ့ကြောင့်ပဲ ဒီစီမံကိန်း (၂) ခုရဲ့ပေါင်းစီးမှုဟာ အလွန်လျှင်မြန်သွက်လက်ပြီး အံ့သြစဖွယ် ခရီးတွင်ခဲ့ပါတယ်။ (တကယ် တော့ ဒီစီမံကိန်းကြောင်း နိုင်ငံတကာသတင်းမှာတက်လာတော့ အနောက်တိုင်းသတင်းသမားတွေက တရုတ်သမတနဲ့ ရုရှားသမတတို့ သြဇာကွန်ယက်တွေလုကြတော့မှာ၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့ကြတော့မှာလို့ ဝမ်းသာအားရ နိမိတ်ဖတ်ခဲ့ကြ ဘူးပါတယ်) ဒီစီမံကိန်း (၂) ခု အပြန်အလှန်ထောက်ခံကြောင်းစာချုပ်ကို ၂၀၁၅ မှာ သမတနှစ်ဦး (ပူတင်နဲ့ရှီ) ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ၂၀၁၆ မှာတော့ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင် ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးဆွေးနွေးပွဲများအတွက် မူဝါဒသဘောတူညီချက် စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ၊၂၀၁၇ မှာတော့ ဆွေးနွေးပွဲများပြီးပြတ်သွားပြီး ၂၀၁၈ မှာ ကုန်သွယ်ရေးနဲ့ စီးပွားရေးပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီး အဲဒီစာချုပ်မှာတော့ နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြမယ့် စီမံကိန်း များဆိုင်ရာ အခိုင်အမာအချက်အလက်များပါဝင်လာပါတယ်။ ၂၀၁၈ မှာတော့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အင်နဲ့အားနဲ့ စတင်လှုပ် ရှားလာပါတော့တယ်။
ဒီပူးပေါင်းမှုကြောင့် ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံအသီးသီးအနေနဲ့ အကျိုးအမြတ်များ မျှဝေရရှိပါတယ်။
ယူရေရှားနိုင်ငံများအနေနဲ့ တရုတ်နဲ့ ရုရှားအကြား ရွေးချယ်စရာမလိုပဲ (၂) နိုင်ငံလုံးနဲ့ ထိမ်းညှိဆက်ဆန်နိုင်မှုကြောင့် စိတ် ပူပန်စရာမလိုတာကြောင့် တရုတ်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ အမြတ်ရပါတယ်။ တခြားဘက်တွေမှာလည်း (ဥပမာ အကောက်ခွန် ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများ ဆက်စပ်မှုများကြောင့် ကုန်ပစ္စည်းစီးဆင်းမှုများ ချောမွေ့လာတာကြောင့် စီးပွာရေးအကျိုး အမြတ်များ ပေါ်ထွက်လာတာတွေတွေ့ရပါတယ်။
ယူရေရှားနိုင်ငံများအနေနဲ့ တရုတ်ရဲ့ ငွေရင်း ငွေနှီးနဲ့ ပူးတွဲစီမကိန်းများကို မြန်မြန်ဆန်ဆန် အကောင်အထည်ဖော်လာ နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တရုတ်နဲ့ ရုရှားသုတေသန အဖွဲ့ ၂ ဖွဲ့ ပူးပေါင်းပြီး နယ်ပယ်စုံ ဖက်စုံ (စီးပွားရေး ပညာရေး ယဉ်ကျေးမှု) ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖန်တီးရေးဆိုတဲ့ခေါင်းစီးနဲ့ အဖွဲ့ခွဲလေးများခွဲပြီးလုပ် ဆောင်နေကြပါသေး တယ်။
ဒီအောင်မြင်မှုများကို အခိုင်အမာ မြင်ကြရတဲ့ တခြားနိုင်ငံအသီးသီးရော ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကရော ပိုးလမ်းမသစ် စီမံကိန်းကြီးအပေါ်ပိုမိုတိမ်းစောင်းလာတာတွေ့လာရပါတယ်။
ဥပမာ ဥရောပသမဂကော်မရှင်မင်းကြီးရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဒုတိယ ပိုးလမ်းမဖိုရမ်ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ ကော်မရှင် ဒုဥက္ကဌ မာရို ဆာကိုဗစ်က ဒီလိုပြောသွားပါတယ်။
တရုတ်ရဲ့ပိုးလမ်းမသစ်နဲ့ ဥရောပသမဂရဲ့ဆက်စပ်မှုအပေါ် ကြည့်မြင်မှုများအကြား နေရာတော်များများမှာ တူညီမှုတွေရှိ တာတွေ့ရပါတယ်။
တချို့ပြသနာများအပေါ် သဘောကွဲလွဲမှုများရှိပေမယ့် အတူတူတွဲဖြေရှင်းရမယ့် ဘုံစိန်ခေါ်မှုများရှိသလို အတူတွဲရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ရမယ့် အခွင့်ကောင်းများလည်း အကျယ်အပြန့် အများအပြားရှိနေပါတယ်တဲ့။
ဒါတွေကတော့ တရုတ်ရဲ့ ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းနဲ့ တခြားနိုင်ငံများအကြားပေါ်လစီပိုင်းဆိုရာ ဆက်စပ်မှုအကြောင်းများပါ။
အပိုင်း (၅) မှာတော့ အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ ဆက်စပ်မှုများကို တင်ပြပါ့မယ်။
1) www.cgtn.com 26-4-2019
Connecting the BRI with Eurasia Economic Union is strategic choice of China and Russia.by Li Ziguo.
2) Beijing Review.2-5-2019.
An International Partnership Model.by Sergey Glaziev.
လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၄) Reviewed by Aung Htet on 10:57 AM Rating: 5